Oganda : Bilaogera nikopak’elatra noho ny tahotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2007 6:53 GMT
Efa nosoratana teto amin’ny Global Voices ny hevitra feno fihantsiana nataon’ny bilaogera sy mpanolotra fandaharana amin’ny onjam-peo Ogandey Dennis Matanda momba ny kolontsaina afrikana, ny (filoha) Idi Amin ary ny momba ny fiverenana hisian'ny fanjanahantany indray izay efa nosoratana teto amin’ny Global Voices. Dia mbola niteraka resabe ihany ny fanaony tamin’ny volana lasa raha nitoraka bilaogy hoe « ahoana ny fomba atao hahafaty ? ». Niteraka savorovoro, fandrahonana ary fandrobana ny fandaharana naka hevitra tamin’io lahatsoratra io ka nahatery an’Atoa Dennis Matanda hitsoaka an’i Onganda. Nampisara-tsaina ny tontolon’ny bilaogy Ogandey io fanapaha-kevitra io, nisy ireo nanohana, nisy ny nananihany ary nisy ireo nihifikifi-doha.
Raha nanoratra ny tontolom-piainany i Tumwujike dia nitantara tamin’ny mpamaky azy hoe, « raha te-hamaky tantara mampalahelo tena nitranga ianao dia hahaliana anao ny bilaogin’i Dennis Matanda ». Nanoratra ho an’i Dennis ihany koa i Tandra nandritra ny Ora mahafinaritry ny bilaogera Ogandey tamin’ny volana septambra hoe « Indrisy moa fa tsy afa-nihaona isika noho ireo tsy ampy fahalalana lasa adala ka nanatery anao hiafinafina. » saingy niakatrakatra noho ny rehetra kosa izay nosoratan’i Degstar :
V : Mino aho fa ny antso hiverenan’ny fanjanahantany no tsy nankasitrahana indrindra. Mahatadidy koa aho fa efa nisy taratasy azoko avy amin’ny Olobe iray ato amin’ny governemanta niangavy ahy hanajanona ny lahatsoratro sasany satria misahana lohahevitra saropady mikasika ny fomba fitarihana sy ny filoha Museveni. Nanoratra izy fa na marina sy manandanja aza izay lazaiko dia tsy raharahan’izay mitondra ny firenena izany fa potehiny avokoa izay manakatsakana ny lalany. Rehefa nandositra ny tanandehibe aho dia niantso azy ary novaliany fa noho ireny lahatsoratro ireny no nikendrena ahy, indrindra moa fa niely nanerana an’i Afrika sy tany ivelany aza ny adi-hevitra.
V : Amin’izao fotoana izao aloha dia mbola tsy voakitikitika ny fampahalalam-baovao…hatramin’ny fivorian’ny lehiben’ny governemanta mpikambana amin’ny Commonwealth amin’ny Novambra farafahakeliny. Fa misy lesoka manomboka mipoitra ihany : Ny fandefasan’onjam-peo any amin’ny faritra Toro any andrefan’i Oganda izao dia misy manorisory amin-javatra be dia be.
Ny singa faharoa mahatonga ny fampahalalam-baovao manana filaminana dia tsy misy sampan-draharaha iray afaka mifehy ny fipariahana haingana dia haingan’ny haino aman-jery azo maimai-poana. Ny Ivotoeran’ny haino aman-jery tokony hisahana izany moa efa tsy itokisana ary efa fantatra tamin’ny fanapahan-kevitra nisy kiantranoantrano kosa Vaomieran’ny Fandefasan’onjam-peo Ogandey (ao anatin’izany ny nandroahana an’i Gaetano ao amin’ny Capital Radio noho ny fanehoan-kevitra mikasika ny pelaka izay tsy izy akory no nilaza azy ; ary eo ihany koa moa ny nandroahana an'i Blake Lambert raha ny an’ny ivotoeran’ny haino aman-jery no resahina).
V : Nandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena tamin’ny 2006 dia natao ho fakan-tahaka ny kamarady faha-27 (27th Comrade) sy Ernest Bazanye. Nisalotra ny anjara asany vaovao izy ireo ary lasa mpitari-kevitra vaovao. Niitatra lavitra ny ambaindain’ny mpamaky blaogy noho ny hatsikana, ny esoesonteny, ny fanehoan-kevitra masiaka tahaka ny an’Ivan. Lasa toy ny safira [taratasy sarobidy] na toy ny rongony tsy ara-dalàna nefa tadiavina fatratra ireny ny blaogy amin’izao fotoana izao.
4 herinandro izayBenin
29 Avrily 2020Mozambika
> Nanoratra izy fa na marina sy manandanja aza izay lazaiko dia tsy raharahan’izay mitondra ny firenena izany fa potehiny avokoa izay manakatsakana ny lalany
Mampalahelo fa ohatry ny miverimberina matetika foana io fomba fitantanam-pitondrana io
P.S: Azafady fa adinona ny nametraka ny firenena tao amin’ny “categories”
30 Oktobra 2007, 09:02
Misaotra anao nampilaza e! fa izao e? raha mahita lahatsoratra tsy tafavoaka ianao nefa avy amiko dia efa vita dika iny fa nisy lesoka kely (izay tsy tiako lazaina) nahazo ahy matoa tsy vita. Mety ho ny rohy sisa no tsy vita, dia tonga dia avoahy aza fady e!
30 Oktobra 2007, 15:08